Huawei Mate 8 Review - Rule News
batari Good iyo design a quruxsan kuma filna in this ku talinaynaa in ka badan tartanka fog ka xoogbadan,.
Mar kasta oo a phone cusub Huawei la sii daayay, waxaa su'aal la mid ah ka codsaday: waxaan leenahay karaa design this, laakiin aan software ka wayn? Sanadkii la soo dhaafay, la Nexus 6p, codsi in ugu danbeyn jawaabay.
mid ka mid No dhab weydiisanaya Nexus 6p la software daran iyo siyaabo badan oo dhab ah waxa Mate ah 8 waa. Waxay leedahay dhista la mid ah, Details camera iyo waa mid aad u dhakhso ah, laakiin waxa ay hardan adag in si dhab ah u tartamaan. Waa weli phone wanaagsan, laakiin waa fursad kale seegay for Huawei si dhab wacdarro dhigaan ee USA iyo UK.
← Microsoft Band 2 Review: Inta badan awood leh The Latest in Tech Sex →